> Resource> Atụmatụ> Wedding Òkù Kaadị - Olee otú iji diy a Pụrụ iche Wedding Òkù Kaadị
Ọ bụ ihe kasị ịtụnanya ihe ná ndụ gị na-alụ di na gị hụrụ n'anya. Na ụbọchị ị na-ekwu "Ee, m na-eme." bụ otu n'ime ihe ndị kasị ibubata ụbọchị n'oge ndụ gị. Ma tupu ụbọchị agbamakwụkwọ, ị ga-ahụ na njikọ aka ọzọ, na Agbamakwụkwọ ịsa Party (ma ọ bụ bachelorette ọzọ), na ịlụ nri abalị ọzọ na na. Ya mere, ka na-egosi enyi gị na ndị ezinụlọ gị obi ụtọ, ezi obi, nkwanye ùgwù, na ndị ọzọ, na-eziga a pụrụ iche agbamakwụkwọ òkù ga-a idemfo. Ebe a bụ ụfọdụ Atụmatụ na-eme ka a ọmarịcha agbamakwụkwọ òkù kaadị.
Ụfọdụ Atụmatụ na agbamakwụkwọ òkù kaadị
Eme ezi agbamakwụkwọ iji jide n'aka na ị na-eme oké mbụ echiche, ụfọdụ agbamakwụkwọ òkù kaadị Atụmatụ na etiquettes na-depụtara n'okpuru.
Akpọkọta ndị unu anatara nke invitees tupu ị na-eme òkù kaadị iji jide n'aka na ọ dịghị onye na anya.
Ọ bụrụ na ndị kpọrọ mmadụ abụọ ịkọrọ a n'ụlọ ma ọ bụ ndụ ọnụ, ma ọ bụ di na nwunye na aha dị iche iche, na-eji ma zuru aha.
Ikpo nke oge kpọmkwem gụnyere hour, ụbọchị na afọ na adreesị, gụnyere Street, Road na Okporo ụzọ.
Black na-ejikarị dị ka okwu na agba na bụ nnọọ mara na classy.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ụmụ na-abịa ka agbamakwụkwọ, adịghị haa na na agbamakwụkwọ òkù kaadị.
Banyere njikọ aka ọzọ, na Agbamakwụkwọ ịsa, wdg
Ga-esi mara ihe onye ọ bụla ọzọ bụ na mgbe ha ga-enyemaka na onye ga-kpọrọ na-n'ozuzu echiche nke gị agbamakwụkwọ òkù.
The njikọ aka ọzọ: emekarị ẹsịn di na nwunye ahụ nne na nna 1-3 ọnwa mgbe amaghị ịkpọsa na usọrọ njikọ aka, na n'otu oge, nyere ga-eme n'ọdịnihu agbamakwụkwọ ọbịa na-esi mara ibe ha. N'ozuzu, ndị ikwu na ndị enyi ya na-kpọrọ. Kemgbe ụwa, ndị nwunye na nne na nna nọrọ n'ụlọ njikọ aka ọzọ, ma ọtụtụ oge a di na nwunye nọrọ n'ụlọ ha onwe ha ememe. Ịmụta otú ka njikọ aka ọzọ òkù.
The Agbamakwụkwọ ịsa: N'ịbụ 1-2 ọnwa tupu agbamakwụkwọ dị ka onyinye na-enye ndị ọzọ a na-alụ ọhụrụ na-abụ na atụmanya nke agbamakwụkwọ ya. Na-emekarị nwanyi enyi dị ka odibo nke nsọpụrụ, bridesmaids ma ọ bụ gị na nne gị bụ ezigbo enyi na-kpọrọ. Ịmụta otú ka Agbamakwụkwọ ịsa òkù.
The bachelorette ọzọ: N'ịbụ ọtụtụ izu maka a nwaanyị nke bụ banyere na-lụrụ tupu nnukwu ụbọchị agbamakwụkwọ. Ọ bụ ọsọ ka na-elekọta mmadụ gburugburu na-na-enwe mgbe okokporo ọzọ. Ọ ga-abụ oké oge maka girlfriends iji nweta ọnụ tupu ụbọchị agbamakwụkwọ. Ịmụta otú ka bachelorette ọzọ òkù.
The mmeghari nri abalị:-enwekarị mgbe agbamakwụkwọ mmeghari na abalị tupu agbamakwụkwọ ememe. Ndị mmadụ na-etolite agbamakwụkwọ ọzọ ga-kpọrọ. The ikwu na ndị enyi nke na nwunye nwere ike izute na mmeghari nri abalị na onwe ha obi ụtọ. Ọ na-eje ozi dị ka ohere maka di na nwunye na-ekele onye ọ bụla maka enyemaka ha na agbamakwụkwọ preparations. Ịmụta otú ka ịlụ nri abalị ọzọ òkù.
Iji nyere gị aka mfe ime a agbamakwụkwọ òkù kaadị, DVD ngosi mmịfe Nrụpụta pụrụ inyere gị aka. Download a software inwe a na-agbalị!
Nweta Best foto mmetụta Software na Mepụta Ịtụnanya Slideshows
3 Nzọụkwụ na Tinye 'Chọta anyị na Facebook' bọtịnụ weebụsaịtị